ဂျိုးဖြူကန်အား အဆိပ်ခတ်သူ မွတ်ဆင် (၄) ဦး ဖမ်းမိ (Breaking News) ~ Myanmar Express
ဂျိုးဖြူကန်အား အဆိပ်ခတ်သူ မွတ်ဆင် (၄) ဦး ဖမ်းမိ (Breaking News)
ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးကို ရေးပေးဝေနေသော ဂျိုးဖြူရေကန် အား အဆိပ်ခတ်သူ မွတ်ဆလင် အမျိုးသား (၃) ဦး နှင့် အမျိုး သမီး တစ်ဦးကို မကြာခင်ကပဲ ဖမ်းဆီးရမိလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ တရားခံများကို သက်ဆိုင်ရာမှ စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီး ရေကိုလည်း စစ်ဆေးနေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။တစ်လအတွင်းမှာပဲ စစ်တွေ၊ ကျော်ဖြူ နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှ ရေကန်အများအပြားကို အဆိပ်ခတ်ခံရသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာက ရေမသောက်ရန် လိုက်လံ စော်အောခဲ့ကြရသည်။ ယခု ဂျိုးဖြူကန်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပရှိ ပထမဆုံး အဆိပ်ခတ်ခံရသော ရေကန်ဖြစ်သည်။Myanmar Express
9 July 2012 09:29
fuck you ( မွတ်ဆလင် ) kill them all
ဟုတ်တယ်သမိုင်းမှာ ၃ ယောက် ဆေးရုံတင်ထားရတယ်တဲ့
Kill all Muslims and expel all Muslims from Myanmar.
9 July 2012 11:15
You are right. Islam and Mulsims are wicked religion and wicked race. Myanmmar government , all Rakhine people and all Myanmar people kill all wicked muslims in Myanamar.
9 July 2012 11:32
Spread this wicked muslim news to all Myanmar websites and Myanmar blogs in Myanmar , USA , Canada , UK , France , Germany , Europe , Australia ,Singapore , Malaysia , Thailand and World. Kill all illegal Bangladesh muslim immigrants and Myanmar Muslim in Myanmar and expel all muslims from Myanmar.
9 July 2012 11:35
ဒီစောက်ကုလားတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ဖို့ အချိန် တန်ပြီ။ မဟုတ်ရင် ရှေ့လျောက် ပိုဆိုးလာလိမ့်မယ်။
သ ဘောထား ပြော့ပျောင်းတယ်ဆိုတာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပဲကောင်းပါတယ်
မအေ လိုးကု လားတွေ ; ပြ င်းပြ င်း ထ န် ထ န် နှိ ပ် ကွ ပ် ပ စ် ပါ !
9 July 2012 15:23
ဘင်္ဂလားကုလားများက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရခိုင်ပြည်သားနံမည်ခံလိုသဖြင့် ဒီစကားကို ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီ့အရင်က ဒီကုလားများအတွက် နံမည်ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ဒါကတော့ ကုလားဆိုး သို့မဟုတ် မူဂျာဟစ်များ ဖြစ်သည်။
ဒီ မအေလိုး ခွေးကုလားတွေကို မြန်မာ့မြေပေါ်က မောင်းထုတ်ပစ်ရမှာ......။ တစ်ကမ္ဘာလုံး ဆောက်ပြဿနာရှာနေတာ ဘယ်ကောင်တွေလဲ ကြည့်လိုက်.... လူအများစုက ခွေးကုလားတွေပဲ.....။ အပြင်သွားရင်တောင် ကုလားဆို ဘယ်ကောင်မှ ကြည့်လို့မရဘူး.....။
9 July 2012 17:25
အစွန်းရောက်မွတ်စလင် ကုလားတွေကို ဘယ်နေရာကိုပို့ရမလဲမသိဘူး။ ဒီဂျိုးဖြူရေကိုသောက်နေတာ ဗမာတင်မဟုတ်ဘူး၊ သူတို့အစ္စလာမ် တွေလည်းပါပါတယ်။ ဘယ်သူမပြုမိမိ မှုပေါ့။
9 July 2012 19:02
ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပေးပါရခိုင်အရေးမှာလို တော့မလုပ်ပါနဲ့ကုလားတွေက အလျော့ပေး ရင်ကန်းတက်တယ်ဒီတခါ နောက်မလုပ်ရဲ အောင် အရေးယူပေး ပါ
9 July 2012 19:13
အကိုကြီး ကိုမြအေးရေ ခင်များတို့ လုပ်ငန်း စပြီလား
9 July 2012 19:57
မူ ဆ လင် တွေ သိပ် လွန် လာ ပြီ။သူ တို့ ကို ဘယ်လို နည်း လမ်းနဲ့ နှိမ် နှင်းကြ မလဲ မောင်း ထုတ် ကြ မလား သတ် လိုက် ရ မလား
အရမ်းမိုက်ရိုင်း လွန်းပါတယ်ရန်ကုန် တမြို့ လုံးကလူတွေ သောက်သုံး မိရင် ဒုက္ခရောက်ကုန်တော့မယ်အကုန် သေဒဏ်ပေး ပါ
10 July 2012 00:10
FUCK ALL COMMENT
10 July 2012 02:57
ဂျိုးဖြူရေကန်ကို တကယ် အဆိပ်ခတ်တယ် ဆိုရင် တိတိကျကျ စစ်ဆေးဖို့ လိုတယ်-တော်ကြာဘယ်အဖွဲ့ က ဘယ်လိုကြံစည်တာပါ ဆိုတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး- ဒီအသံမျိုး မကြားချင်ဘူး ။ တကယ်လို့ကုလားကသာ အဆိပ်ခတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ( ၄ ) ကောင်နဲ့မပြီးသေးဘူး- နောက်က သူတို့ ကို ကြိုးကိုင်အမိန့် ပေးတဲ့လူတွေ တပုံကြီး ရှိနေတာကို ဖမ်းဆီးဖို့ လိုတယ်- မြန်မြန်စစ် မြန်မြန်ဖမ်း မြန်မြန် ကြိုးစင်တင် ခွေးကုလားတွေကို ဒီလိုမဟုတ်ရင် မဖြစ်တော့ဘူး
13 July 2012 09:43
14 July 2012 21:29
စောက်ကုလားတွေကိုအလျှော.ပေးနေရင်တဖြည်းဖြည်းပိုဆိုးလာလိမ့်မယ်...ရန်ကုန်မှာကကုလားများတဲ့တချို့ မြို့နယ်တွေကဗလီတွေမှာဝက်အလာကိုခေါ်တဲ့ မနက်ညအချိန် တိုင်းမှာလော်စပီကာနဲ့ အနားကကုလားအားလုံးကိုခေါ်ခွင့်ရတယ်။သင်္ဃန်းကျွန်း(ခ)ရပ်ကွက်မှာရှိသမျှဗလီအားလုံးအသံချဲ့ စက်ဖြင့်နေ့ ရောညပါအော်နေတာအမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကျတော့အသံချဲ့ စက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်မြို့ နယ်ကိုတင်ပြခွင့်ပြုချက်ယူရပါတယ်။......ကိုယ့်ဘာသာကျတရားခွေဖွင့်ဘို့ တောင်ခက်ခဲနေရ တယ်ဗလီတွေနားမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလည်းရှိပါတယ်...ကုလားကြတော့အခွင့်အရေးပေးနေတဲ့မျိုးမစစ်တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းအရေးယူပေးဘို့ လိုပါတယ်။မင်းကိုနိင် တို့ စစ်တွေလာတာဝိုင်းမသတ်လိုက်ဘူးလား။
kill all of musilmget out our country
လုပ်ကြပါဟ။ ကုလားပြသာနာကို ဖြေရှင်းကြပါ။
မြန် မာ နုငိငံမှာ ရှိတဲ ကုလားတွေအကုန်လုံး.း မြန်မာ ဇာက် သွင်း ရမယ်.. ဘုရာား ရှိ ခိုးနဲ. ဗမာ စကားရေ ရေ လည် လည်. မတက် ရင် ပြင်း ပြင်း ထန် ထ်န် အရေး ယူ လိုက် Anonymous
ကုလားတွေ အကုန်သတ်ဆိုတဲ့ စကားတော့မပြောပါနဲ့ကုလားမချောချောလေး ၂ ယောက်လောက်တော့ချန်ထားပေးပါဗျာ.
စောက်ကုလားတွေ တသက်လုံးလူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ခွေးပဲဖြစ်နေမှာ Anonymous
18 March 2013 16:49
ခွေးလိုကောင်တွေ တို့တွေကို မင်းတို့က အဆိပ်ခပ်သပ်မယ်ပေါ့ မင်းတို့ကိုလည်းတို့မြေမှာမထားဘူးဟေ့
24 April 2013 18:16
ခွေးလီးကို ရှစ်ခိုးနေတဲ့ ခွေးကုလားတွေ။ခေါင်းဆောင် မြ အေးကစပြီး အကုန်သတ်ပစ်လိုက်ကွာ။